SDL: Govera Yakabatana Meseji neVako Vepasirese Vatengi | Martech Zone
SDL: Govera Yakabatana Meseji neako maGlobal Makasitoma
China, Gunyana 25, 2014 Chitatu, September 24, 2014 Douglas Karr
Nhasi, vatengesi vari kutsvaga iyo inokurumidza uye yakangwara nzira yekugadzirisa vatengi vavo ruzivo vanotenderedza misoro yavo kune iro gore. Izvi zvinobvumidza rese data revatengi kuyerera mukati nekubuda mumasisitimu ekushambadzira mushe. Izvi zvinoreva zvakare kuti ma profiles evatengi anogara achigadzirisa uye data revatengi maseti anogadzirwa otomatiki mune chaiyo-nguva, ichipa maonero akazara akabatanidzwa ehukama hwevatengi pamabhizimusi echiratidzo.
SDL, ivo vagadziri ve Mutengi Chiitiko Cloud (CXC), inoti vatengesi vanogadzirisa kwavo kwevatengi ruzivo mugore vane kugona kwete kungo gadzirisa mishandirapamwe, asi kugadzira kuenderera kwekudyidzana kutenderera kunosvika kune mutengi pane zvavanoda. Ngatitarisei kuti izvi zvinoshanda sei:
Muvhidhiyo iri pamusoro, iwe unodzidza kuti iyo SDL CXC inounza isina musono, dhata-inotungamirwa zviitiko pane yega poindi yerwendo rwevatengi - pamatanho, zvishandiso nemitauro. Pane imwechete SaaS-yakavakirwa chikuva, iyo CXC inopa iyo indasitiri yekutanga yakasanganiswa yevatengi ruzivo (CX) manejimendi suite iyo inosanganisira yemagariro, webhu zvemukati, mushandirapamwe, e-commerce, analytics uye zvinyorwa zvekushandisa maturusi. Iyo CXC zvakare inosangana neiyo SDL Mutauro Cloud kuitira kuti mabhenji awedzere mikana yavo yekudyidzana nevatengi mumutauro wavo uye tsika.
SDL Kasitoma Chiitiko Chiitiko Cloud (CXC) inosanganisirwa tekinoroji chikuva inoita kuti makambani aunze zvisina musono, zvinofambiswa nedata kune vatengi kunzvimbo dzese dzerwendo rwekutenga - munzira dzese, zvishandiso nemitauro. 72 yemhando yepamusoro 100 zvigadzirwa zvinoshandisa tekinoroji yeS SDL kupa hukuru hwevatengi zviitiko.
SDL's imwechete chikuva nzira inopa vashambadziri kuona kwakabatana kwekudyidzana kwavo nevatengi. Kubva pane imwe nzvimbo mucherechedzo unogona kuona kushanda kwemazano ayo uye nekugadzirisa zvinowirirana pane kusangana kwevatengi kwese, kana kutora nzira yegranular kana zvichidikanwa.
Heino muenzaniso weiyo CXC mushandisi interface:
Iyo SDL CXC inovimbisa inokurumidza uye yakapusa nzira yevatengesi yekudyidzana nevatengi vavo uye kuvapa simba kuti:
Ita pfungwa yekutaurirana kwevatengi nekutora data revatengi kwese kwekubata poindi yekushambadzira kuzivisa kushambadzira uye zvigadzirwa sarudzo
Nunura akangwara manhamba edhijitari nekushandisa analytics uye kunanga kusangana kwemushandirapamwe kwevatengi vanhasi
Simba hyper-zvakakosha zviitiko nekuongorora ma profiles uye maitiro mune chaiyo-nguva yekugadzira kuendesa kwazvino zvichienderana nechishandiso, nguva yezuva, nzvimbo, mutauro, nhoroondo yevatengi uye nezvimwe
SDL mutengi, Schneider Electric, nyanzvi mune manejimendi manejimendi akawana kuti iyo imwechete-chikuva uye yegore-yakavakirwa nzira yakaita kuzadzisa zvinangwa zvavo zvekupa kubatana uye isina musono ruzivo rwevatengi kuve nyore. Iyo kambani yakachinjika kupfuura nyika dzinopfuura zana uye akawanda mabhizinesi zvikamu. Vakatarisana nedambudziko rakajairika kune epasirese, mabhizinesi emakambani: Inogona sei kambani ine chakaparadzirwa, chakasiyana chigadzirwa uye mhinduro renji, inoshanda pasirese pasirese, kuendesa chimwe chinhu chakakodzera, chinowirirana uye nekukurumidza kune vese vatengi uye geographies yavanoshandira?
Kuti vagone izvi, vakatsvaga webhu-yakagadziriswa mhinduro iyo yaizoisa pakati yavo yedhijitari kushambadzira zano, kuiendesa pamwe neayo edhijitari yevatengi ruzivo uye kubvumidza iyo chaiyo nhanho yekuchinjika kuti ichinjike kune yemuno vatengi zvinodiwa. SDL yakapa izvo chete.
Isu tine shungu dzekuenderera tichichinja ruzivo rwedu rwewebhu kutenderedza vatengi vedu nekusangana nezvido zvavo zvinogara zvichichinja. Isu tinotenda SDL yakaiswa zvakanaka kuti itibatsire kushandura webhusaiti yedu kuva chiitiko chakasarudzika, kupindura kune zvakanangana nemutengi wega wega. Kana isu tiri kuendesa iyi nhanho yekukosha kune vatengi vedu online, vanowana mhinduro dzinokurumidza kune zvavanoda, yavo mhando kuvimbika kunowedzera uye yedu yese ecosystem inokunda. Shawn Anopisa, Senior Mutevedzeri Wemutungamiri weWebhu & Dhijitari Kushambadzira kuSchneider Electric
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei Schneider Electric iri kushandisa iyo SDL CXC, tinya pano. Dzidza zvakawanda nezve SDL Yevatengi Zvakaitika Gore.
Tags: muchinjiko-chiteshimuchinjikwa-chishandisomuchinjikwamutengi data setimutengi ruzivo goremutengi ruzivo manejimendikudyidzana kwevatengimutengi kudyidzana kutendererakudyidzana kwevatengicxcx manejimendizvepasi rosemameseji epasiresehyper-zvine chekuitarevatengi vatengi ruzivorevatengi revatengi ruzivo manejimendi suiteakangwara madhijitari macampaignkudyidzana kutendererapasi rosemameseji epasi rese-Chaicho nguvasaasSchneider Electricsdlsdl cxcsdl mutauro goreShawn Anopisa
Leanplum: A / B Edza Yako Nhare Yemukati uye Meseji
5 Matipi Ekubudirira Shandura Yako Online Tarisiro kuva Mutengi